चीजहरू जुन तपाईंले माइक्रोवेभमा राख्नु हुँदैन
18-11-2019 | अन्य
सबै माइक्रोवेव प्रयोगकर्ताहरूलाई केहि कारणहरू छन् कि केही सामग्री र खाद्य पदार्थहरू राख्नु हुँदैन भनेर थाहा छ। यद्यपि, थोरै मद्दतको लागि, हामीले " माईक्रोवेभमा नराख्ने चीजहरू " गरेका छौं, यदि यसले तपाईंलाई अरू केहि सहयोग गर्न सक्छ भने।
यदि तपाईं कठोर-उमालेको अण्डा खान चाहनुहुन्छ भने, धैर्यवान हुनुहोस्। अवश्य पनि, यसलाई माइक्रोवेभमा पकाउने प्रयासको बारेमा सोच्नुहोस्, किनकि यो विस्फोट हुनेछ। र यो दुबै कच्चा अण्डा र पहिले नै पकाइएकोमा लागू हुन्छ (जुन तपाईं तात्न चाहनुहुन्छ होला)। तपाईं केवल सख्त अन्डाहरूको साथ, कोसिस गर्न सक्नुहुनेछ, तर सर्तमा तपाईं पछि माइक्रोवेव सफा गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ (जुन तपाईंले चेतावनी दिनुभयो त्यो गद्दार होइन)। कडा-उमालेको अण्डा को रूप मा, तपाईं जान्नुपर्दछ कि जर्दी पनि विस्फोट हुनेछ। र त्यो किनभने अण्डा कडा खोलको भित्र एक तरल प्रोटीन हो। जब खाना माइक्रोवेवमा तताईन्छ, भित्री मात्रामा बढ्दछ, तर खोलले गर्दैन। के यो स्पष्ट छ कि अण्डाहरू एक चीज हो जुन तपाईंले माइक्रोवेभमा राख्नु हुन्न ? खैर, त्यो ...
कसैको पनि राम्रो आईडिया छैन: माइक्रोवेभमा ताजा राखेर पागल पाउँनुहोस् ... ठीक छ, हैन। यद्यपि थोरैले सोच्दछन् (भाग्यवस), हामी तपाईंलाई अहिले नै भन्न चाहन्छौं: यो जोखिम हो। र विशेष गरी यदि यो अpes्गुर हो, किनकि तिनीहरूले स्पार्क लिन र प्रज्वलित गर्न सक्दछन् (यद्यपि यसको संरचना ठूलो रूपमा पानी हो) यदि एक दाना भाँचेको छ भने। त्यसोभए तपाईले आयनीकृत ग्यास भनेर चिनिने वस्तुको स्थिति देख्नुहुनेछ, तर तपाईंले पनि त्यहि ग्यासको कारण यस उपकरणलाई क्षति पुर्‍याउनुहुनेछ, जब पानी अ the्गुरबाट वाष्पीकरण हुन्छ। त्यो हो: अर्को कुरा तपाईंले माइक्रोवेभमा राख्नु हुँदैन ।
कि माइक्रोवेव प्रकाश पग्लियो र तपाईं एक हस्तपुरुष हुनुहुन्छ, के तपाईं बल्ब आफैं बदल्न चाहानुहुन्छ? यसको बारेमा सोच्नुहोस् पनि! यो एक चीज हो जुन तपाईंले माइक्रोवेभमा राख्नु हुँदैन । क्लासिक बल्बले धातुको फिलामेन्ट (टung्गस्टन) बोक्दछ, हलोजनहरूले धातु समावेश गर्दछ, त्यसो भएन! र फ्लोरोसेंटको साथ पनि खराब, किनकि यसले विषाक्त पारा वाष्पहरू छोड्नेछ। र यसले एक उत्सुक दृश्य तस्बिर दिन सक्छ, यो वास्तवमा प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम हो। वास्तवमा, पारा वाष्प हावामा तैरिन सक्दैन र विन्डो खोलेर मात्र हट्दैन। तपाईं खाना पनी भान्सा गर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग भान्साकोठामा वा साधारण काउन्टरटप्समा।
हास्य कयौं पटक, के हामीले सुन्‍यौं कि कसैले लुगा माइक्रोवेभमा सुकाइदियो? ठिक छ, यो झूट हो। यो अर्को कुरा हो जुन तपाईंले माइक्रोवेभमा राख्नु हुँदैन ! तिनीहरूको सामग्रीमा निर्भर गर्दै, केही टिश्युहरू छुटकारा पाउनको लागि व्यवस्थित हुनेछ, अरूहरू सिधै जलेरछन्।
प्याकेज गरिएका उत्पादनहरू
माइक्रोवेभमा ढकनीसहित बन्द कन्टेनर राख्नु बुद्धिमानी होइन। कम्तिमा पनि, सावधानी अपनाउनुपर्दछ कि यो पूर्ण रूपमा भरिएको छैन र ढक्कन बन्द छैन। खाना विस्तार गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, र साथै यो आवश्यक छ कि भापले खानामा तापको वृद्धिलाई उम्कन अनुमति दिन आवश्यक छ।
प्याकेज आफैले निर्दिष्ट नगरेसम्म, यो अर्को चीज हो जुन तपाईंले माइक्रोवेभमा राख्नु हुदैन। कन्टेनरहरूले तयार खाना समावेश गरे पनि उनीहरू गत्ता वा प्लास्टिक जस्तो देखिन्छन्, कहिलेकाँहि धातुको कम्पोनेन्ट हुन्छ, र तपाईंलाई थाहा हुन्छ धातुलाई के हुन्छ ...
डिशहरू जुन माइक्रोवेवमा जान सक्छन् यसले संकेत गर्दछ। यदि तपाईंसँग पुरानो हो, वा तपाईंले माया गर्ने कसैबाट वंशानुगत रूपमा, धातुको थ्रेडको साथ पनि, यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईं माइक्रोवेभमा राख्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै प्लास्टिकका लागि पनि जान्छ, तिनीहरूले "माइक्रोवेव सेफ" प्रतीक पनि बोक्नु पर्छ वा तिनीहरू फोडाले भर्न सकिन्छ र उपकरण भित्र पग्लिन पनि सकिन्छ।
यदि तपाईं हाँस्नुभयो भने पनि, यो तरकारी माइक्रोवेभमा जान सक्दैन। र तपाईं किन आश्चर्य? किनभने यसको उच्च सामग्री फलाम, सेलेनियम र म्याग्नेशियम र यी रासायनिक तत्त्वहरूले धातुको रूपमा समान प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्दछ: स्पार्क्स र सम्भावित आगो।
हामीलाई आश्चर्यचकित गर्न सक्ने अर्को! यो रक्सीयुक्त पेय पदार्थ राख्न को लागी उपयुक्त छैन - र कम उच्च ग्रेड - माइक्रोवेभमा। अधिक डिग्री, अधिक खतरा। परिणाम: सबैभन्दा नराम्रो अवस्थामा तपाईं देख्नुहुनेछ कसरी ढोकाले बाँकी उपकरण बन्द गर्छ। यो ठट्टा होइन। राम्रो छैन यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंले माइक्रोवेभमा राख्नु हुन्न !
एल्युमिनियम पन्नी र धातु भाँडा
यो यस्तो चीज हो जुन प्रायः सबैलाई थाहा हुन्छ: सबै धातुहरू माइक्रोवेभबाट टाढा राख्नुपर्दछ! तपाईंले यसलाई माइक्रोवेभमा राख्नु हुँदैन । यद्यपि केही मोटा धातुहरू, जस्तै उपकरणको भित्ताहरू, भट्टीले उत्पादन गरेको छालहरूको प्रतिरोध गर्न सक्छ, पातलोहरू, जस्तै एल्युमिनियम पन्नी वा टिन शिटहरू, एकदम चाँडो तताउँछ। तताउँदा, केही धातु उत्पादनहरूका असमान सतहहरू, जस्तै काँटाको दाँत, एल्युमिनियम पन्नीको बल्ज र झुम्काहरूले विद्युतीय चापहरू (जुन शोरगुल गर्ने स्पार्कको रूपमा देख्न सकिन्छ) सिर्जना गर्न सक्दछ, र प्रभाव उत्पन्न गर्दछ। हामीले आशा गरेनौं। तातो संग, हामी संग एक ग्यारेन्टी आगो छ।
अहिले सम्म हाम्रो चीजहरूको चयन तपाईले माइक्रोवेभमा राख्नु हुन्न । पक्कै पनि तपाईहरु मध्ये कतिपयलाई उनीहरु थाँहा थिए, हुन सक्छ केहीले जान्दैनथे। जे भए पनि, यसलाई हेर्नुहोस् र, यदि यो हुन सक्छ भने, हामीलाई आफ्नो टिप्पणी दिनुहोस्। र यदि तपाईंसँग कुनै पनि अन्य सामग्रीको साथ कुनै अनुभव छ भने, हामी यसलाई थप्छौं, तर हामीलाई भन्नुहोस्!
खाना जुन फ्रिज हुन सक्दैन
कलाको कार्यहरू जुन अवस्थित छैन
जिज्ञासाहरु जुन जोसका साथ गर्न सकिन्छ
क्रोएशियामा 10 ठाउँहरू जुन तपाईं सम्झन सक्नुहुन्न
वजन कम गर्न सबै भन्दा राम्रो खेलहरू
युक्तिहरू जसले तपाईंको जीवनलाई भान्सामा सजिलो बनाउँदछ
20 स्पेनिश शहरहरू जुन रातको भ्रमणको योग्य छन्
Farts बारे तथ्यहरू
एक क्यान्डी क्रश लतको लक्षण